Eden Hazard '' In Aan U Ciyaaro Real Madrid Waa Riyadeeyda- Maamulka Real Madrid Oo Fursadan In Ay Ka Faa'iideystaan Laga sugayo. - GOOL24.NET
Eden Hazard ” In Aan U Ciyaaro Real Madrid Waa Riyadeeyda- Maamulka Real Madrid Oo Fursadan In Ay Ka Faa’iideystaan Laga sugayo.
Maamulka Real Madrid ayaa looga fadhiyaa in ay rumeeyaan riyada xidiga ugu dhaq dhaqaaqa badan Chelsea ee Eden Hazard madama uu saxaafada horteeda ka qirtay in uu jecel yahy u ciyaarista maaalin uun kooxda difaacaneysa tartanka koobka horyaalada yurub ee Uefa Champions League ee Los Balancos .
Kabtanka qaranka Belgium ee Eden Hazard oo ah xidig ku sigatay in uu ku biro Real Madrid Suuqii xagaaga ayaa saxafada u sheegay hadalo muujinaya sida uu u jecel yahy kooxda reer Spain kadib markii uu Chelsea ka caawiayaay galabnimadii axadii in ay 3-0 ku dubtaan Southampton.
Eden Hazard ayaa ku bilaabay hadalkiisa “Real Madrid waa kooxda ugu fiican aduunka , aniga madoonaayo in aan been sheego. Real Madrid waa riyadeyda ilaa markii aaan yaraa, ,” ayuu yiri Hazard.
“Waan arki doonaa waxa dhaca . madonayo in an maalin walba ka hadlo wax yaabaha la xiriira arintaasi mana u hayo waqti, laakiin waxa kaliya ee an ka hadleeyno ayaa ah mustaqbalka.” ayuu Hazard hadalkiisa ku sii daray.
Kubad abuurahan ayaa hoosta ka xariiqay in uusan dooneynin in maro wadadii uu qaaday Thibaut Courtois uguna biiray Real Madrid, inta uu socdo Xagaagan.
“Madoonayo in ay taasi dhacdo , waxan doonayaa waxa u wanagsan nafsadeyda , sidoo kale waxan doonayaa waxa uwacan koooxda maxaa yeelay kooxda waxa ay isii say wax walba , si lamid ah hada kuma dhihi karo ‘haa , waxan saxiixayaa heshiis cusub sidaa darted waa in an sugnaa waxa iman doona .
Eden Hazard ayaa ka mid ah xidigaha aadka loola xiriirinayaay sanadihii lasoo dhaafay Kooxda Real Madrid waxaana haatan uu hadalkiisa kusoo beegmayaa xili Real Madrid ay ku jirto jawi aan wanagsaneyn kooxdana aya wali baadi goobeyso badalkii Cristiano Ronaldo.